यौन चाहाना भएमा महिलाले गर्ने ५ कुरा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यौन चाहाना भएमा महिलाले गर्ने ५ कुरा
आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२ मा प्रकाशित !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ ।
१ महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन भने बुझ्नुस उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन ।
२ यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो लामो र गहिरो स्वास लीरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उत्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्छ । कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको संवेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन । ३ यदि कुनै पनि स्त्रीले तपाइँसँग एकान्त होस भन्ने चाहेको अनुभव गर्नु भो वा धेरै समय तपाइँसँग विताउन चाहेको बुझ्नु भो भने उनी के चाहन्छिन भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
४ स्त्रीले शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहेमा उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छन । अधिकाँश महिलाको अनुहारमा पनि यो चाहाना भएको कुरा रंगको परिवर्तनले झल्किन्छ । अनुहार रातो हुने वा तापक्रम बढ्ने यस्ता समान्य लक्षण हुन ।
५ यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन भने बुझ्नुस उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन भने कुरा बुझ्नस उनी के चाहन्छिन ।
PREVIOUS POST Previous post: सवारी अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा दश वस्तुगत प्रश्न मिलाए पुग्ने
NEXT POST Next post: जिल्ला विस्तारित बैठक गर्न निर्देशन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०७:३२